Nọvemba. Fọdụ akwụkwọ edemede maka ọnwa a | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nọvemba. Fọdụ akwụkwọ edemede maka ọnwa a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Akwụkwọ ndị ntorobịa, Novela, Black akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Na-amalite November ma gosi akụkọ akụkọ na panorama ugbua na-eche ihu na-adịghị anya Christmas. Onwe-aka, ugbu a, nwa, ihunanya-agụụ mmekọahụ, okorobịa… Maka ndị na-agụ ihe niile masịrị ha. Enwere ọtụtụ ma ugbu a, m na-enyocha ihe ndị a Isi 8 nke nnukwu aha site na ngalaba niile.
1 Nyere onwe gi aka
1.1 Elsa Punset - Obi Happytọ
1.2 Silvia Llorens na Bet Comabella - You na-emesị na-edozi ụlọ gị
1.3 David Summers - Taa m tetara na-eme mkpọtụ
2.1 Salman Rushdie - Mbelata nke Nero Golden
2.2 Yanis Varoufakis - Ikpa àgwà ka ndị toro eto
3 Akwụkwọ ndị ntorobịa
3.1 Anna Todd - Smụnne
4 Black akwụkwọ
4.1 Lorenzo Silva - Ọtụtụ anụ ọhịa wolf
5 Ihunanya-erotic akwụkwọ
5.1 Megan Maxwell - Abụ m Eric Zimmerman
Nyere onwe gi aka
Onye Elisa - Obi ụtọ
Sale na mmalite ọnwa Elsa Punset ọhụrụ aha. Ngwaọrụ maka nweta obi uto site n'amamihe gbakọtara kemgbe ọtụtụ narị afọ na gburugburu ụwa. Maka ya anyị na-eme njem site na obodo ndị mebiri emebi na onye nede akwukwo mere ka ayi ju aju, dika ima atu, ihe ndi Greek na ndi Rom ochie mere iji di nma.
Ọ na-emekwa ka anyị tụlee ọrụ ndị nnukwu ndị na-ede uri, ndị na-ese ihe, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọzọ maara ihe hapụrụ anyị nke ụbọchị anyị. Ihe nketa nke anyi g’eji mata onwe anyi nke oma. Ma n'ezie buru n'uche ihe mmụta dị mkpa nke ndụ anyị nwere ike ịmụta site na ịgagharị ụwa.
Silvia Llorens na Bet Comabella - Finally na-emesị na-edozi ụlọ gị
Site n'inwe ihe ịga nke ọma nke Marie Kondo na akwụkwọ ya, aha a na-esikwa na ya apụta ugbu a ndị ọkachamara na ntanetị weebụ Hazie onwe gị. N'ime ya ha na-enye anyị Ntụziaka bara uru ma doo anya maka ịhazi ụlọ, gbanwee usoro omume ma mepụta omume ọhụụ nke na-enyere anyị aka ibi ndụ kwa ụbọchị na ọdịmma ka ukwuu. A mgbanwe echiche ịmụta otú e si adị na-arụpụta ihe n'ụlọ ma nye iwu ka mpaghara ọ bụla rụọ ọrụ ndị ahụ n'ụzọ dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma.
Uchechukwu David Taa m tetere na-enye somersault
Maka Fans nke David Summers, onye ndu, onye na-ede abụ na onye na-agụ egwú nke otu pop-rock Ndị nwoke G site na 80. Nchịkọta na-eweta akwụkwọ a ebe na-atụgharị uche n'otú i siworo rute n'ọnọdụ ndị ị ga-eche ihu mgbe ahụ. Ma n'otu oge ahụ inwe ike ịnọgide na-enwe ụkpụrụ na ndụ ya. Ntughari banyere imekọ ihe ọnụ, otu esi ejikwa ihe ịga nke ọma, olee otú oke ama na ihe ọhụụ na-emetụta ya.
Salman Rushdie - Ọdịda nke Nero Golden
A ọnwa mbụ Akwụkwọ ọhụrụ Rushdie na-apụta, naonye hriller nke oge a gosipụtara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ọdịbendị nke North America nke oge a. Rushdie na-eji akwukwo, ihe nkiri na omenala pop ewebata ndi odide puru iche, bido na onye isi ochichi na-acho akwukwo nke choro onwe ya ihe gbara ọchịchịrị nke ezinụlọ Golden, jupụtara n'ihe nzuzo ma bụrụ ọdachi. Ọdachi nke nna nna ya, Nero Golden, doro anya echiche nke ọbịbịa Donald Trump n'ike na mgbanwe gbara ọkpụrụkpụ n’etiti ọha mmadụ America.
Yanis Varoufakis - Na-akpa àgwà ka ndị toro eto
E bipụtara na ngwụcha ọnwa a na-ewepụ ya dị ka nnukwu akụkọ ihe mere eme banyere nsogbu Europe. Onweghị ihe dị mma karịa ka otu n’ime ndị ama ama ama ama gwara ya na mbụ. Yanis Varoufakis bụ minista ego nke gọọmentị Greek nke Syriza (nke ọzọ bụ otu aka ekpe), na nke a, ọ na-egosipụta nke ya talent dị ka akụkọ akụkọ ọ na-akọkwa ihe ndị zutere ya na nghọtahie ya na ndị Europe na-akwado nsogbu ahụ. Ọ na-egosi na arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ Europe na mkparịta ụka ya na-agbanwe agbanwe, na n'ikpeazụ, Greek nyefere na-eme mgbe ọpụsịrị gọọmentị.
Akwụkwọ ndị ntorobịa
Anna Todd - ndị nwanyị
Ọzọkwa na njedebe nke ọnwa, n'abalị iri abụọ na asatọ, Ihe omuma ohuru site n'aka Anna Todd, onye edemede nke ikpo okwu Wattpad onye biliri ibu onye amara aha ya Mgbe. Maka ndị na-agụ akwụkwọ site na afọ 16. Na nke mbụ ọ ga-abụ mmalite nke ụwa na mbipụta n'otu oge n'ọtụtụ mba, gụnyere Spain, nke Todd ga-eleta.
ndị nwanyị na-akọ akụkọ banyere ụmụnne nwanyị anọ, Bet, Meg, Amy na Jo Spring, nke, obu ezie na ha di oke iche na ibe ha, ha nwere ike ijikwa ihe niile.
Onyeka Onwenu - Ọtụtụ anụ ọhịa wolf
para njedebe nke ọnwa a na-ebipụta akwụkwọ ọhụụ a ebe ha laghachi Bevilacqua na Chamorro na nyocha nke okwu anọ, mpụ anọ na-eyi egwu nke nwere otu ihe: ndị niile metụtara bụ ụmụ agbọghọ ma ọ bụ ndị nọ n'afọ iri na ụma. Onye ọ bụla n’ime ha na-egosipụta ihe egwu dị iche iche nke ụmụ anyị na ndị na-eto eto na-ekpughe kwa ụbọchị: site n’ụdị nkwukọrịta ọhụrụ site na netwọkụ mmekọrịta, iji maaja ma ọ bụ ịrị elu nke ime ihe ike nwoke na nwanyị n’etiti ndị di na nwunye na-eto eto.
Megan Maxwell - Megan Maxwell Abụ m eric zimmerman
Pụta ugbua na mmalite ọnwa akpa olu nke oku a atụ ogho-apụ de Juo m ihe obula ichoro, ihe egwu ojoo na ama ama nke Megan Maxwell, eze nwanyi nke odidi a.
Eric zimmerman bụ onye ọchụnta ego dị ike nke German nke kọwara onwe ya dị ka nwoke oyi na-enweghị onye, onye na-enwe a mmekọahụ n'enweghị ịhụnanya ma ọ bụ nkwa. N’otu n’ime njem ndị o mere na Spen ileta otu n’ime ndị nnọchi anya ya, ọ hụrụ otu nwa agbọghọ aha ya Judith Flores kwuru Nke ahụ na-adọta ya n'ụzọ ọ na-amabughị. Mgbe m chọpụtara na ọ nwere mmetụta ndị a na-amaghị ama, ọ na-esi na ya pụọ, mana obere oge.
Mgbe ahụ ha na-amalite a mmekọrịta jupụtara n'echiche efu na echiche efu, nke Zimmerman nwere mmasị ịkụziri Judith inwe mmekọahụ na ụzọ ọ na-atụghị anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Nọvemba. Fọdụ akwụkwọ edemede maka ọnwa a
Miguel Hernandez. Afọ 110 nke onye na-ede uri anaghị anwụ anwụ. Nhọrọ nke poems